HUBAAL: Lucas Biglia iyo Leonardo Bonucci oo haatan lagu dari karo liiska EL + Sawirro – Gool FM
HUBAAL: Lucas Biglia iyo Leonardo Bonucci oo haatan lagu dari karo liiska EL + Sawirro
(Milano) 05 Agoosto 2017 – AC Milan ayaa haatan safkeeda si rasmi ah ugu soo dari karta laacibiinta Lucas Biglia iyo Leonardo Bonucci oo ka maqnaa labadii lugood ee ay ilaa haatan Craiova la ciyaartay kooxda AC Milan dhanka Europa League, balse haatan waa lagu soo dari karaa.
Labada laacib ayaan la diiwaan gelinin maaddaama ay kooxda kusoo biireen xilli ay kooxdu ku mashquulsanayd tartanka ICC qaybtiisa Shiinaha taasoo keentay in xilligii la doonayay aan la bixinin damaanaddii dhaqaale taasoo shalay la dhamaystiray.
Sida ay werinayso wakaaladda wararka ee ANSA oo soo xiganaysa Milan waxaa damaanadda dhaqaale bixiyay baanka Ifis oo ka mid ah jaalalka ganacsi ee Milan, waxayna haatan labada laacib diyaar u yihiin kulamada laba lugoodka ah ee ay ku wajahayaan kooxda Macedonian-ka ah ee Shkendija.
Labadan laacib ee Bonucci iyo Biglia ayaa Khamiistii soo dhex istaagey garoonka San Siro oo ciir ciirayay si ay u salaamaan taageerayaasha ay isku cusub yihiin ee AC Milan, iyadoo Maareeyaha Guud ee Milan Marco Fassone uu ciyaarta kaddib sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah oo hor taagan diiwaan gelinta laacibiinta.
Isku aadka koobka Janeraal Daa'uud oo la sameeyay iyo kullamo adag oo ka soo baxay